July Dream: Our World. Your Move.
“All can, in one way or another, each in his own sphere and within his own limitations, do something to help the good work forward.” These words, written by Henry Dunant following the Battle of Solferino, embody the spirit of our International Red Cross and Red Crescent Movement.
ဒီနေ့ မေလ ၈ ရက်ဟာ ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီနေ့ (World Red Cross Day)ပါ။ အဲဒီနေ့ဟာ ကြက်ခြေနီရဲ့ ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဟင်နရီဒူးနန့်ရဲ့ မွေးနေ့ပါပဲ။
ဒီနှစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဟာ ဆိုဖာရီနိုစစ်ပွဲရဲ့ ၁၅၀ ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်သလို IFRC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီနဲ့လခြမ်းနီအသင်းများ ဖက်ဒရေးရှင်းကို ထူထောင်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၉၀ ကြိမ်မြောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျနီဗာ အများသဘောတူညီ စာချုပ်ရဲ့ နှစ် ၆၀ မြောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ရဲ့ Campaign ကတော့ Our World. Your Move. ပါပဲ။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့် တနေ့တခြား ယိုယွင်းပျက်စီးလာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့တတွေ အတူတကွ လှုပ်ရှားကြရအောင်လားဗျာ။
It is our world and the time is now to make our move.
Posted by JulyDream at 11:20 PM
ငယ်ငယ်တုန်းက သူ့ နာမည်ကို စာကျက်တိုင်း ရယ်ခဲ့တယ်ဗျာ။ သူ့ ရေးခဲ့တဲ့ စာသားလေးတော့ အခုမှ သေချာဖတ်မိတယ်။ လူတိုင်း နားလည်တန်ဖိုး ထားတတ်ပါစေဗျာ...။
လူငယ်တွေအတွက်ရော လူကြီးတွေအတွက်ပါ ဗဟုသုတရစရာ စဉ်းစားစရာ ပါ
တို့တွေရဲ့ ကမ္ဘာကြီးကတော့ ပြုစုဖို့လိုနေတာ အမှန်ပါပဲ
* 589 – Reccared summons the Third Council of Toledo
* 1450 – Jack Cade's Rebellion: Kentishmen revolt against King Henry VI.
* 1541 – Hernando de Soto reaches the Mississippi River and names it Río de Espíritu Santo.
* 1788 – The French Parlement is suspended to be replaced by the creation of forty-seven new courts.
* 1794 – Brandedatraitor during the Reign of Terror by revolutionists, French chemist Antoine Lavoisier, who was alsoatax collector with the Ferme Générale, is tried, convicted, and guillotined all on the same day in Paris.
* 1821 – Greek War of Independence: The Greeks defeat the Turks at the Battle of Gravia.
* 1846 – Mexican-American War: The Battle of Palo Alto – Zachary Taylor defeatsaMexican force north of the Rio Grande in the first major battle of the war.
* 1861 – American Civil War: Richmo
* 1326 – Joanna I of Auvergne, queen of France (d. 1360)
* 1460 – Frederick I, Margrave of Brandenburg-Ansbach (d. 1536)
* 1521 – Petrus Canisius, Dutch Jesuit (d. 1597)
* 1587 – Victor Amadeus I, Duke of Savoy (d. 1637)
* 1622 – Claes Rålamb, Swedish statesman (d. 1698)
* 1629 – Niels Juel, Danish admiral (d. 1697)
* 1632 – Heino Heinrich Graf von Flemming, German marshal (d. 1706)
* 1653 – Claude-Louis-Hector de Villars, Marshall of France (d. 1734)
* 1668 – Alain-René Lesage,
2009 (MMIX) is the current year of the Anno Domini/Common Era in accordance with the Gregorian calendar. It isacommon year starting on Thursday and the last year of the 2000s decade.
မှတ်သားစရာပို့စ်လေးကို ဖော်ပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဂျူလိုင်
ဟုတ်တယ်.. လှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာ လူသားတိုင်းပါဝင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်.. ခုဟာက ကျွတ်ကျွတ်အိတ်မသုံးဖို့ လိုက်ပြောရင်တောင် အရူးလို့ အကြည့်ခံရတာမျိုးဆိုတော့....